कलाकार निशा घिमिरेको केही समय पहिला र अहिलेको अवस्था ! बिन्ती छ पूरा पढेर सेयर गरिदिनुहोला। - खबरदार न्युज
June 10, 2021 June 10, 2021 AdministerLeaveaComment on कलाकार निशा घिमिरेको केही समय पहिला र अहिलेको अवस्था ! बिन्ती छ पूरा पढेर सेयर गरिदिनुहोला।
नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बे’स’हारा बनेको छ । निकै नै द’य’नीय अवस्थामा उनलाई देख्न सकिन्छ । उनको अहिलेको यो अवस्था देख्दा नि’श’ब्द नुहने सायदैं होलान् ।
कुनै समय सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा आफ्नो पहिचान बनाउन संघ’र्षरत अभिनेत्री हुन् निशा घिमिरे । तीन दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियो, केही टेलसिरियल तथा छोटा फिल्महरुमा आफ्नो प्रतिभालाई धेरथोर उनले प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । ललितपुर कालेश्वर, बतासेकी उनी यसक्षेत्रमा केही गरेरै छोडने अठोटका साथ लागि परेकी थिइन् । भविष्यमा एक सफल कलाकार बनेर आमदर्शकमाँझ चिनिने उनी यतिखेर चक’ना’चुर।
अभिनय पढ्ने सिलसिलामा उनी केही समय अगाडि भारतमा गएकी थिइन्। शो क्रममा उनी स’वा’री दुर्घ’टनामा परेकी हुन् । भारतको तेरादुनस्थित निशा सहितको ४ जना विद्यार्थी सा’वार रहेको कारमा ट्रकले ठ’क्क’र दिंदा दु’र्घ’ट’ना घटेको निशाका बाबु बताउछन। बाबुको अनुसार, त्यस समय उनलाई भारतकै कैलाश अ’स्प’ता’लमा १८ दिनसम्म राखियो। त्यति बेला भारतीय रुपैया १० लाख खर्च भएपछि आर्थिक अ’भा’वका का’रण उ’प’चा’र ख’र्च जु’टाउन ज’टि’ल बनेका कारण उनलाई नेपाल ल्याई काठमाडौँको ट्र’मा सेन्टरमा भर्ना गरिएको हो ।
उ’प’चा’रको अ’भा’वले उनका यो अवस्थामा पुगेको चलचित्रकर्मी दीपक राज पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘केही दिन पहिले पहिलो पटक टिकटकमा उहाँको यस्तो ना’जु’क अव’स्था देख्दा आँसु रोकिएन मेरो !पहिले र अहिलेको यो अ’व’स्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्ने जो कोहीको आँखा रसाउछ होला सायद ! एउटा राष्ट्रको गहना निशा उ’प’चार’को अभावले जी’व’नम’र’णको दोसाँ’धमा छिन ।
मेरो अनुरोध🙏 हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छिन्,’ उनले सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि पनि सम्पूर्ण विवरण दिएका छन् । त्यसैले सहयोगी मनहरुले सनराइज बैंकमा निशाका बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरेको नाममा रहेको खाता नम्बर ०८४०६१३६१३२०५००१ मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ । निशाको परिवारको आर्थिक अव’स्था ना’जु’क भएका कारण सक्ने सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अ’पिल गरिएको छ । सहयोगका लागि मोडल निशाका बुवालाई सिधा सम्पर्क प्रेम प्रसाद घिमिरे ९८५१२३८९५२ मा गर्न सक्नुहुन्छ । उनको शि’घ्र स्वा’स्थ्य लाभका भगवान् पशुपतिनाथ सँङ्ग यहि प्राथना गर्दछु !